SanDisk 32GB Klas 4 SDHC Kaadị ebe nchekwa, Inwe Nkụda Mmụọ-Free Packaging- SDSDB-032G-AFFP (Label nwere ike ịgbanwe) - តថ្លៃ Tortlay - Online Auctions ke Cambodia
All Apụta Auctions
Egosi All Categories
Egosi All ọnọdụ
តថ្លៃ Tortlay - Online Auctions ke Cambodia > Electronics > SanDisk 32GB Klas 4 SDHC Kaadị ebe nchekwa, Inwe Nkụda Mmụọ-Free Packaging- SDSDB-032G-AFFP (Label nwere ike ịgbanwe)
SanDisk 32GB Klas 4 SDHC Kaadị ebe nchekwa, Inwe Nkụda Mmụọ-Free Packaging- SDSDB-032G-AFFP (Label nwere ike ịgbanwe)
SanDisk 32GB Klas 4 SDHC Flash Kaadị ebe nchekwa, Inwe Nkụda Mmụọ-Free Packaging- SDSDB-032G-AFFP (Label nwere ike ịgbanwe)
Weghara ma-echekwa gị niile na-echeta na ọnụ na a pụrụ ịdabere SanDisk SDHC Kaadị ebe nchekwa (32GB). Na 32GB (1) nke ohere nchekwa, kaadị-enye gị ohere na-ọtụtụ nke foto na video enweghị agba si nke ohere. Kaadị nakwa na atụmatụ a writeable labeelu, na-eme ka ọ dịkwuo mfe karịa mgbe ọ bụla ka na-niile haziri.
Store photos, music, na vidiyo na gị SDHC kaadị ebe nchekwa.
Capture, ụlọ ahịa, ma na-eso kwesịrị ncheta oge, n'ebe ọ bụla ị na-aga.
32GB nke Nchekwa maka Music, Data, Photos, na Video
Na mgbakwunye na dijitalụ ese foto, ọtụtụ obere media Player Njirimara SDHC kaadị ohere mepere maka na ịchekwa music, data, na video. The SanDisk SDHC Kaadị ebe nchekwa na-enye gị ọtụtụ ohere maka gị niile-awụ ọsọ n'ugwu, TV na-egosi, na obere vidiyo, na ndị ọzọ. Kaadị bụkwa ezigbo maka akpụ akpụ faịlụ n'etiti kọmputa, ese foto, na ndị ọzọ na Ngwa.
Writeable Label maka Easy Organization
The SanDisk SDHC Kaadị ebe nchekwa nwere oghere writeable acha ọcha ohere na n'ihu na kaadị, na-eme ka ọ dị mfe ịmata gị dị iche iche kaadị. Iji otu kaadị ebe nchekwa maka na foto ezumike niile, na ọzọ maka niile ọkacha mmasị gị music–labeelu-eme ka ọ dị mfe ịhụ nke bụ nke na a ilekiri.
Pụtara pụrụ ịdabere na Wuru inogide njọ
The SanDisk SDHC Kaadị ebe nchekwa na-enye pụrụ ịdabere na arụmọrụ. The kaadị bụ waterproof, okpomọkụ àmà, ujo na vibration àmà, na x-ray àmà (2). N'agbanyeghị ebe gị njem-ewe gị, ị ga-enwe mgbe nile ike weghara apụghị ichefu echefu oge.
1GB = 1,000,000,000 bytes. N'ezie onye ọrụ nchekwa na-erughị.
Gịnị bụ na Igbe
SanDisk SDHC Kaadị ebe nchekwa (32GB).
SanDisk SDHC Kaadị ebe nchekwa atụmatụ:
Na-enye 32GB (1) nke nchekwa maka ebe na-gbaa dijitalụ ese foto
Nwalere na-arụ ọrụ n'okpuru aka ike ọnọdụ
Siri ike-ala ebe nchekwa maka pụtara pụrụ ịdabere
Writeable labeelu maka mfe njirimara na nzukọ
Kaadị na-agụnye nche atụmatụ maka nchebe nke nwebiisinka data
SD kaadị na-n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile SD-Dabara ngwaọrụ
Speed ​​arụmọrụ fim: Klas 4 (dabeere na SD 2.0 Nkọwapụta)
Ụgbọ mmiri na akwụkwọ Inwe Nkụda Mmụọ-Free Packaging
Elu àgwà na pụrụ ịdabere kụziri site na a 5-afọ ole na akwụkwọ ikike
Agwụcha Soonest Auctions
Intel Core i7-4770K Quad-Core Desktọpụ Processor (3.5 GHz, 8 MB Cache, Intel HD)
Ihe na Electronics
Ọnọdụ: Phnom Penh
Agwụcha ke: 65589
Xigmatek XAF-F1256 120mm x 120mm x 25mm Fan (3-Pin, aka uwe, White ikanam)
Agwụcha ke: 194761
Ihe na Igwe na mbadamba
Agwụcha ke: 214966
Carl A1 DT638 Premium Akwụkwọ trimmer
Ihe na Ndị ọzọ
Agwụcha ke: 430157
Okomoko DIY European Silver Amara mgbaaka na okooko osisi iko n'ihi na Women Jewelry
Agwụcha ke: 768497
9H adịchaghị n'obi Glass ihuenyo Nchebe Nkiri maka Samsung Galaxy S4
Agwụcha ke: 915176
Agwụcha ke: 1041756
Osisi nke Onyinye – Vinyl Akwụkwọ mmado maka Onyinye Shop Display
Ihe na Furnitures
Agwụcha ke: 1354181
ngụ oge 2 Multi-ọrụ NFC Smart Ring Door mkpọchi Waterproof maka Android Phone
Agwụcha ke: 1632490
eji ngwa nju oyi – n'ihi Sale: National Nr-B282M
Agwụcha ke: 2284841
Copyright © 2015 តថ្លៃ Tortlay - Online Auctions ke Cambodia. Ikike niile echekwabara